ကျွန်တော်ကြိုက်သော...... - MYSTERY ZILLION
မူလ › Member ဆိုင်ရာ › Reader's Pick ဝင်ရောက်ရန် · အဖွဲ့ဝင်ခြင်း မင်္ဂလာပါ!
Alexander November 2008 edited November 2008 in Reader's Pick MZ မှာ ကျနော်ကြိုက်တဲ့ Thread လေးက Star Lay ရဲ. " kaspersky7ကိုblacklistedမဖြစ်အောင် " ဆိုတဲ့ Thread ပါ။Alexander က Kaspersky crazy လေ။ Virus လေးတွေကိုချစ်တတ်တဲ့ Virus ချစ်သူတစ်ယောက်ဆိုလဲမမှားဘူး ... ( သတ်ရတာပျော်လို့ချစ်တာ .... :P )Kaspersky ကို non blacklisted ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတဲ့ အချိန်မှာ .... ဘာ Virus မှ မကြောက်တော့ဘူး ...အားလုံးအတွက်လဲ အသုံးကျတဲ့ Thread လေးပါ .... အဲဒါကြောင့် ညွှန်းလိုက်တာပါ ...Link က >>> http://www.mysteryzillion.org/forums/showthread.php?t=823ဒါကတော့ Kaspersky ရဲ. အသံထွက်အကြောင်း ရေးထားတဲ့ Thread ပါ >>> http://www.mysteryzillion.org/forums/showthread.php?t=1036 Sign In or Register to comment. Powered by Vanilla